Daa'imman yeroo dheeraadhaaf manatti hidhaman rakkoo ijaaf saaxilamu jedhu qorattonni - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Daa’imman yeroo dheeraadhaaf manatti hidhaman rakkoo ijaaf saaxilamu jedhu qorattonni
Daa’imman yeroo dheeraadhaaf manatti hidhaman rakkoo ijaaf saaxilamu jedhu qorattonni
Ijoollee umrii xiqqeenyaatti alatti baasuun rakkoo kana kan salphisu ta'uu isaati kan qorattoonni gorsan.
Yeroo dheeraadhaaf mana keessa turuun, keessumattuu yeroo ijoollummaa, rakkoo ijaa ‘myopia’ jedhamuuf (fagotti waa arguu dadhabuu) kan nama saxilu ta’uu isaa beeksisan. Qorattoonni Northwestern Medicine tibbana seelii rakkoo myopia’f nama saaxiltu qorattoodhaan bira gayuu danda’aniiru. Yeroodhaaraadhaaf rakkoon kuni waan maatii irraa dhaalamu ta’uu hin oolu jedhameeti kan shakkamaa ture.
Seelii rakkoo myopia’f nama saaxiltu tana rakkoon kan argatu umrii daa’imummaatti yeroo dheeraadhaaf ifnana uumaa (aduu) jalaa baqatanii mana keessatti dabarsuudha. Ifnana aduu gayaa dhabuu fi rakkoon ijaa wolitti hidhata qabaachuu isaaniiti kan qorannoon kuni jala sarare. Namoonni ykn daa’imman rakkoo kana qaban yeroo heddu fulee ijaatti kan dhimma bayan.
Rakkkoon myopia rakkoo fagotti waa arguu dadhabuuti. Dhala-namaa biliyoona tokkotti tilmaamamutu rakkoo kana, sadarkaan wolcaalus, qaba jedhama. Rakkoon kuni hammaataa dhufuudha kan qorannoon garagaraa agarsiisu. Amma garuu seeliii dirqama isii bayuu dadhabuudhaan rakkoo myopia’f nama saaxiltu bira gayuun, saayinsistoota yeroon rakkoo kanaaf afala argan dhiyaateera amantaa jedhuun guuteera. Ijoollee umrii xiqqeenyaatti alatti baasuun rakkoo kana kan salphisu ta’uu isaati kan qorattoonni gorsan.
Previous articleIyyannoon hojii (CV’n) dalagaa argachuudhaaf nama gargaaru qabxiilee sagal guutuu qaba
Next articleSanyiin leencaa kanniin biroon adda ta’uu hin oolu jedhame bosona Baalee keessatti argame